Xulka Soomaaliya oo Guul ka gaaray kulankii lugta labaad ee Itoobiya balse ku haray Goolal tirsi | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xulka Soomaaliya oo Guul ka gaaray kulankii lugta labaad ee Itoobiya balse ku haray Goolal tirsi
(20-11-2018)Waxaa soo idlaatay ciyaartii u dhaxeysay xulkeena Soomaaliya iyo Ethiopia, taa oo qeyb ka aheyd isreeb reebka koobka Oleybikada Adduunka.
Xulka qaranka Soomaaliya ayaa iskeenay kulankii galabta lugta labaad ee isreeb reebka Oleymbikada Adduunka iyagoo ka war qaba guuldaradii kasoo gaartay kulankii lugta hore, wuxuuna kulan ka dhicay Jabuuti oo u dhigan guriga xulkeena.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan wiilasheyna ayaa waxey soo bandhigeyn kubadd ay ku qanceen taageerayasha u soo daawasho tagay ciyaartan.
Qeybtii hore kulanka ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku horkaceyso xulkeena waxaana goolka dhaliyay Feysal Axmed, sidaas ayaa lagu kala nastay qeybtii hore dheesha.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulkeena ayaa waxay sii laba jibaareen weerarka ay ku hateen xulka Ethiopia si ay u dhaliyaan goolal kale balse ma aysan u noqon iney gool kale ka dhaliyaan daqiiqadaha ka dhinaa ciyaarta.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 1-0 ay guusha ku raacday xulkeena Soomaaliya waaa guul kale taariikhi ah uu xulka Soomaaliya ka gaaray Ethiopia, xili hore ay guul kaga soo gaareen xulka 17-sano jirada maantna waa 23-sano jirada.
Hadii ay FIFA ogolaato in kulamada Home ay Soomaaliya ku ciyaarto gurigeeda wax badan ayaa is badali doona xaqiiqdii waayo niyad dhis aad ugu duwan ay ka heli lahaayeen guryaha kale dhawaana waa loo ogolaan doonaa insha alah.